UTshabalala ethubeni lokudlalela iqembu lase-Asia
USIPHIWE “Tshabalala okuvela ukuthi ufunelwa iqembu e-Asia. Isithombe: SIPHIWE TSHABALALA/INSTAGRAM
SITHEMBISO MKHIZE | November 19, 2019
ANGASE athushuke e-Asia, uSiphiwe “Shabba” Tshabalala osekuyogamanxa isizini engaqashwe ndawo.
Ngokuthola kwaleli phephandaba sekuphele izinyanga uJazzman Mohlakgane i-agent kaTshabalala enezingxoxo namaqembu ehlukene ezwenikazi lase-Asia ezamela umsebenzi lo mdlali owashayela iBafana Bafaba igoli lokuqala kwiNdebe yoMhlaba eyayikuleli ngo-2010.
Nakuba kungacaci ngamagama amaqembu kodwa umthombo uveze nokuthi akakalilahli uMohlakgane ithemba lokutholela lo mdlali iqembu e-Azerbaijan.
Izindaba zokumataniswa kukaTshabalala naleli lizwe okudlala kulo uPule Ekstein kwiSabah FC zike zavela maphakathi nonyaka kepha zabuye zashabalala.
Ekupheleni kwesizini edlule yeSuper Lig, yaseTurkey selokhu uTshabalala ashiya iBB Ezurumspor edliwe izembe ubengakaze ayithole ikilabhu.
Kuke kwavela namahebezi abethi angase abuyele kwiKaizer Chiefs adlale kuyo iminyaka ewu-11 kodwa kwabuye kwangenzeka .
Ubuye wabhadanywa eziqeqesha nePassion FC edlala kwiMpumalanga ABC Motsepe League, nokho kwabuye kwavela ukuthi ubesiza ithimba labaqeqeshi.
Nakuba engalambile uTshabalala njengoba ewumuntu ohlelekile futhi onamabhizinisi okubalwa nelokudla aliphethe ngokubambisana noReneilwe Letsolonyane weHighlands Park kodwa kuthiwa iyamkhathaza indaba yokungadlali.
Umthombo uveze ukuthi okwamanje lo mdlali eyokugaxa amakhokho ethala yinto angaphuphi ngayo nakancane, usakholelwa ekutheni umzimba wakhe usengamqhuba iminyaka embalwa
“Empeleni kusukela uTshabalala ehlukane neBB Ezurumspor, uMohlakgane uhlala esendleleni ezamela lesi sethenjwa sakhe umsebenzi. Lapho egxile khona nalapho okubukeka izinto zingase zilunge yikhona ese-Asia. Kukhona neqembu lase-Azerbaijan . Uma konke kuhambe kahle angase ajoyine elinye lala maqembu ngoDisemba noma ngasekuqaleni konyaka ozayo.
Umthombo uveze ukuthi nakuleli akhona amakilabhu afuna ukusayinisa lomakadebona kodwa inkinga iqala uma sekumele kuvunyelwane ngezinto ezithile kwizinkontileka.
Kuthintwa uMohlakgane uthe kuyinto engafihliwe ukuthi umatasa nokufunela uTshabalala umsebenzi.
Wale waphetha ukudalula amazwe namaqembu afunela kuwo uTshabalala umsebenzi.
“Engingakuveza wukuthi nginezingxoxo namaqembu adlala kumaligi aphesheya azovulwa ngoDisemba nangoJanuwari. Uma konke kuhambe kahle uShabba elakuleli uzolifulathele ngoDisemba. Okwanje kuselukhuni ukukhuluma ngalolu daba ngoba kusekuningi okusabhungwa,” kubeka uMohlakgane.
Ukugcizelele ukuthi uTshabalala eyokugaxa amakhokho emgibeni yinto esekude, kunamasizini ambalwa asafuna ukuwadlala.